ဘာလို့ … အိုဗာစီးကောမှာ လိုကယ်နံပါတ်တွေ ပေါ်နေသလဲ ( answer to E Tone ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘာလို့ … အိုဗာစီးကောမှာ လိုကယ်နံပါတ်တွေ ပေါ်နေသလဲ ( answer to E Tone )
ဘာလို့ … အိုဗာစီးကောမှာ လိုကယ်နံပါတ်တွေ ပေါ်နေသလဲ ( answer to E Tone )
Posted by Foreign Resident on Jul 31, 2011 in Creative Writing, Other - Non Channelized |9comments
ဘာလို့ … အိုဗာစီးကောမှာ လိုကယ်နံပါတ်တွေ ပေါ်နေသလဲ
( It can be wrong now, but it wasareal story about 3/4 years ago)
This is because of corrupted MPT staffs,
Myanmar oversea charges are too dear ( both in ward & out ward ),
So, foreign telecom company approached to corrupted MPT staffs &
made secret agreement.
Their procedure is like that,
When the oversea call was coming,
MPT staff handled this call not to pass through MPT network,
Instead, they connect this oversea call directly to their mobile phone,
( they have specially designed equipment to do it, frequency tuner & etc )
They madeacall through their own mobile phone,
But, this became local call & ( needless to say ) comparatively very cheap.
That’s why, its number was shown as local number.
They took agreed money from foreign telecom company.
I don’t want to blame those corrupted MPT staffs as they are poor.
But, drawback is this smuggler connection is not good like ordinary MPT one.
I sufferedalot of time during my stay in Myanmar.
အပေါ်က ကိုနိုင်ငံခြားသား ကြီးပြောတာ ကတပိုင်းပေါ့ လေ၊ ကျွန်တော်လက်တွေ့ ကြုံတာက အဲဒီ နိုင်ငံပြင်ပက ဖုန်းကဒ်ရောင်းတဲ့ လူကိုယ်တိုင် ဒီမှာလာလုပ်တာကို တွေ့ ဘူးတာပါ၊ သူ့ လုပ်ပုံက နယ်စပ်( ထိုင်း၊ တရုတ် မြန်မာ gsm) မိတဲ့ နားမှာ အခန်းတခန်းငှါးလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ မြန်မာ gsm ၄၊ ၅လုံး ငှါးလိုက်တယ်၊ထိုင်း (သို့ )တရုတ် internet လိုင်းယူထားလိုက်တယ်၊ ဖုန်း တွေနဲ့ computer ၊ internet ဆက်တဲ့ device တွေ inverter တွေ ဆင်ထားလိုက်တယ်၊ ပြီးရင် အခန်းကို သော့ တွေခတ်ပြီးထားခဲ့ တာဘဲ၊ oversea ကလာတဲ့ ဖုန်းတွေက internet line ကနေတဆင့်၊ မြန်မာ GSM ကို PROGRAM က AUTO DIAL လုပ်သွားတယ်၊ဒါကြောင့် call quality ကများသောအားဖြင့်မကောင်းဘူး၊ internet မှာ pfingo ပြောသလို delay ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတယ်၊ အဲဒီနံပတ်ပေါ်လာတဲ့ ဖုန်းကိုလည်း ပြန်ဆက်ရင် ဘယ်တော့မှမကိုင်ဘူး။ပုံမှန် က မြန်မာပြည်ကိုခေါ်ရင် mpt က အ၀င်အတွက် ပိုက်ဆံရတယ်၊အခုလို ပုံစံဖြစ်သွားတော့Mpt ကပိုက်ဆံမရတော့ ဘူး၊ gsm local call ဘဲရတယ်၊ အဲဒီလို လုပ်တဲ့ လူတွေထဲမှာ mpt ကအဆင့်မြင့်ဝန်ထမ်းအချို့ လည်းပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့ တဲ့ ၃၊၄ နှစ်က အထွက် bill သိန်းချီပြီး အ၀င် call မရှိတဲ့ ဖုန်းတွေကို လိုင်းပိတ်ပစ်လိုက်တယ်၊ ဖုန်းလည်းမသိမ်းဘူးနော်၊ ဘာအကြောင်းပြချက်မှလည်းမပေးဘူး၊
ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်းတောင် အငှားကောင်းလို့ဖုန်းတလုံးပိတ်ခံရဘူးတယ်၊ အဲဒီလိုဖုန်းတွေက ၄-၅ လလောက်ပြီးရင် ပြောင်းငှါးပြန်ရော၊အဲဒီတုန်းက mpt က သတင်းစာမှာတောင် oversea ဖုန်း Local နံပတ်ပေါ်ရင် တိုင်ကြားနိုင်သည်ဆိုပြီးကြေငြာလိုက်သေးတယ်၊ အခုလို topup စနစ်နဲ့ ဆိုတော့ ပို တောင်လုပ်လို့ ကောင်းအုံးမယ်
VOIP သုံးနေလို့ဖြစ်တယ်ထင်တာပဲ…။ အင်တာနက်ကနေဖုံးခေါ်တာလေ..။
ယူအက်စ်ကစီးပွားရေးသမားတချို့ က… မြန်မာပြည်အတွက်ဖုံးကဒ် ထုတ်ရောင်းရင်.. အဲဒီလိုအင်တာနက်ကတဆင့်ဟာတွေသုံးတယ်လို့ထင်တယ်..။
ဟိုးအရင်ကတော့… ဗီယက်နမ်တို့..တရုတ်တို့တွေလုပ်ကြတယ်…။ အခုတော့.. မြန်မာတွေကိုယ်တိုင်.. ဂိတ်ကီပါတွေ..ကွန်ပြူတာတွေနဲ့.. လုပ်ကုန်ကြတယ်ထင်တယ်..။
အစိုးရကတော့ ပိုက်ပိုက်ဘယ်ရတော့မလည်း..။ ပြည်တွင်းမှာ.. လိုကယ်ကောလုပ်လိုက်တာကိုး..။
ယူအက်စ်ကနေ..မြန်မာပြည်ခေါ်ဖို့.. ၄ဒေါ်လာကို.. ၁၃မိနစ်ကနေ..၁၈မိနစ်အထိပဲရသေးတယ်..။
ဒီ post လေးဖတ်ရတာ ဗဟုသုတ ရပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗဟုသုတ နဲပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ အင်္ဂလိပ်စာ ညံ့လို့ မနည်းဖတ်ရပါတယ်ရှင်…..
ထိုင်း နဲ့တရုတ် နယ်စပ် တွေမှာတော့ မြန်မာဖုန်း နဲ့တစ်ဖက် နိုင်ငံဖုန်းကို အီလက်ထရောနစ် ပညာသုံးပြီး မွန်းမံ လိုက်တယ်။ အော်ပရေတာတော့ လိုတယ်။ အော်ပရေတာက နေပြီးတော့ ဆက်ချင်တဲ့ နံပတ်ကို ပြန်နှိပ်ပေးပြီး ချိတ်ပေးလိုက်ရင် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံ လုံး ကနေ ကြိုက်တဲ့ နိုင်ငံကို ခေါ်လို့ ရပြီ။ အသံ အရည်အသွေးကတော့ မဆိုးပါဘူး။ ပဲ့တင်သံ နည်းနည်း ရှိတာကလွဲလို့ ။ ဒီနောက်ပိုင်း ပဲ့တင်သံတောင် မပေါ်အောင် လုပ်နိုင်နေပြီ။ နယ်စပ်မြို့ တွေမှာတော့ ဒီနည်းနဲ့ ပဲ တစ်ဖက်ရောက်နေတဲ့ သားသမီး ဆွေ မျိုး တွေကို ဆက်သွယ်တယ်။ ဒီဆားဗစ် ပေးတဲ့သူ ကို သိမှပဲ သုံးလို့ ရတဲ့ ပုံစံပါ။
အခု အိုဗာစီးကောတွေ ပြည်တွင်းသုံး နံပါတ် ပေါ်တာတော့ ပို ပြီး နည်းပညာမြင့် မယ်ထင်တယ်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး အိတ်ချိန်းနဲ့ချိတ်မ ထားရင် လုပ်လို့ ရမယ်မထင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အိုဗာစီးကော ဆိုရင်တော့ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး အိတ်ချိန်းကို မဖြတ် ပဲနဲ့ ဘယ်လို ရောက်နိုင်မလဲ။ နယ်စပ်မှာ သုံးတဲ့နည်းက သိသာတယ် အော်ပရေတာက လိုက်ပြောပေး နေတာဆိုတော့။
Whooo, A lot of methods & ideas to abuse our Government’s telecom system.
Anyhow, it appeared, it must have at least one MPT staff.
TNO saying is only for incoming oversea call
နယ်စပ်( ထိုင်း၊ တရုတ် မြန်မာ gsm) မိတဲ့ နားမှာ အခန်းတခန်းငှါးလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ မြန်မာ gsm ၄၊ ၅လုံး ငှါးလိုက်တယ်၊ထိုင်း (သို့ )တရုတ် internet လိုင်းယူထားလိုက်တယ်၊ ဖုန်း တွေနဲ့ computer ၊ internet ဆက်တဲ့ device တွေ inverter တွေ ဆင်ထားလိုက်တယ်၊ ပြီးရင် အခန်းကို သော့ တွေခတ်ပြီးထားခဲ့ တာဘဲ၊ oversea ကလာတဲ့ ဖုန်းတွေက internet line ကနေတဆင့်၊ မြန်မာ GSM ကို PROGRAM က AUTO DIAL လုပ်သွားတယ်၊
Leonus 007 saying is for outgoing oversea call in border area.
” မြန်မာဖုန်း နဲ့တစ်ဖက် နိုင်ငံဖုန်းကို အီလက်ထရောနစ် ပညာသုံးပြီး မွန်းမံ လိုက်တယ်။ အော်ပရေတာတော့ လိုတယ်။ အော်ပရေတာက နေပြီးတော့ ဆက်ချင်တဲ့ နံပတ်ကို ပြန်နှိပ်ပေးပြီး ချိတ်ပေးလိုက်ရင် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံ လုံး ကနေ ကြိုက်တဲ့ နိုင်ငံကို ခေါ်လို့ ရပြီ။ “
အော… ဂလိုကိုး … ။ မသိပါဘူး ဖုန်းနံပါတ်က အခုခေါ်တော့ အိုဗာစီးနံပါတ်… တနာရီအတွင်းထပ်ခေါ်တော့ လိုကယ်နံပါတ်ဆိုတော့ … ဘယ်လိုများလဲလို့ … ။
သိတဲ့သူတစ်ယောက်ကပြောတာတော့ အိတ်ချိန်းနဲ့ဆာဗာလေးဆောက်ပြီး လုပ်စားကြတယ်ပြောတယ်။
အဲသလိုလုပ်စားကြတဲ့သူတွေက အခုတော့ နိုင်ငံခြားမှာပဲသွားနေကြတော့တယ်။
ဒီမှာနေရင် မိသွားရင် ကွိမှာ မို့။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. အင်္ဂလန်က သူငယ်ချင်း ခေါ်တုန်းက အဲဒီလို ပေါ်နေလို့ သူ့ကို ပြန်မေးတာ မပြောပြဘူး